Darpan Nepal – के तपाईको दाँत पहेलो छ यसरी बनाउनुस्, दुई मिनेटमै पहेँलो दाँतलाई सेतो र चम्किलो ! (भिडियो सहित)
के तपाईको दाँत पहेलो छ यसरी बनाउनुस्, दुई मिनेटमै पहेँलो दाँतलाई सेतो र चम्किलो ! (भिडियो सहित)
Sep 15, 2018Admin12Health0Like
काठमाडौँ । लसुन खानाले हुने फाइदाका बारेमा हामी मध्ये धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । आज हामी तपाईंहरुलाई लसुन खानाले हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं । लसुनको पाइदा आयुर्वेदमा लसुनका बारेमा अनेकौं फाइदा उल्लेख गरिएको छ।
हामी मध्ये धेरैले लसुनलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्ने गर्दछौं। कसैले यसलाई काँचो प्रयोग गर्ने गरेका छौं भने अरुले यसलाई सब्जी तथा अचारको रुपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन्। तर लसुनलाई पनि पोलेर खान हुन्छ र १ भन्ने विषयमा धेरैको जिज्ञासा हुन् सक्छ ।
लसुनमा सल्फर नामक तत्वको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। यसमा एलिसिन नामक तत्वको पनि मात्र उपलब्ध हुन्छ । अनि यीनै गुणका कारण लसुनले किटानुनासक तत्वालाई नष्ट पारिदिन्छ । यसमा उपलब्ध फंगल सँग लड्ने ताकत तथा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताका कारण कैयौं रोगका बिरुद्ध लसुनले रामबाणको काम गर्छ ।
अनि लसुनमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने, यसमा लुकेको फाइटकेमिकल पुरुष स्वास्थ्यका लागि अति फाइदा जनक हुन्छ ।
१.लसुनको एक पोटी विहीन वाँ बेलुकी खाएमा सरीरको पाचन सक्तीलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ।
२. सेक्स हर्मोनमा बृदि :- लसुनमा एलिसिन नामक तत्व उपलब्ध हुन्छ, जसले पुरुषको सेक्स हर्मोनलाई बलियो र ठीक बनाउछ । यसको प्रयोगले पुरुषमा यौन दुर्बलता ठीक हुन्छ । अनि लसुनमा उपलब्ध सेलेनियम तथा अत्यधिक मात्रामा उपलब्ध भिटामीनले बीर्यको मात्रा ढाउनुका साथै गुणमा बृद्धी हुन्छ ।
३. पेटमा हुने समस्यालाई निको पार्ने:- यदि तपाईको पेटमा समस्या छ वा चांडै इन्फेक्शनको शिकार हुनुपरेको छ भने, भुटेको लसुन खानुहोस्। यसको सेवन गर्नाले छाती पोल्ने समस्या, बान्ता तथा पेटमा हुने खराबी लगायतका समस्याहरु चाँडै हराएर जान्छ ।
४.क्यान्सरबाट बचाउने:- लसुन प्रयोग गर्नाले शरीरमा तापमान तथा गर्मी उपलब्ध हुन्छ र चीसोबाट बचाउँछ । साथै यसमा क्यान्सरसँग जुध्न सक्ने शक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ। लसुनलाई विशेषगरी प्रोस्टेट र ब्रेष्ट क्यान्सरबाट बचाउन सक्ने अचुक ओखतीको रुपमा लिइन्छ।
५. मुटुलाई बलियो बनाने :- भुटेको लसुनले ब्लड प्रेसर पनि नियन्त्रण गर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचाप अर्थात् हाई ब्लड प्रेसरले ग्रसित व्यक्तिका लागि भुटेको लसुन सेवन गर्न सल्लाह दिने गरिन्छ, किनकि यसले बीपी (ब्लड प्रेसर) लाई नियन्त्रण गर्छ ।
Previous Postगायक प्रदीप लामाले गाए दुनियाँ रुवाउने गीत (हेर्नुहोस् भिडियो) Next Postयी ४ राशि भएका मानीसहरुले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैन्न थाहा पाईराखौं, जानीराखौं!!